Prefabricated imvulophu yolawulo-Prefabricated imvulophu yolawulo-Nanjing BeiLiDa Entsha Mathiriyali Indlela Engineering Co., Ltd.
Ulapha : Ikhaya>imveliso>Iphaneli emiselweyo yemvulophu
Inani Model: Iphaneli emiselweyo yemvulophu
Ngophuhliso lwetekhnoloji yale mihla, izindlu zokwakha zinokwenziwa kwiibhetri nakwiiseti ezifana nemveliso yomatshini. Logama nje izinto zokwakha esele zisetyenziselwe ukuthutha ziya kusiwa kwindawo yokwakha zaze zahlanganiswa.
Izakhiwo esele zilungisiwe zaqala ukuvusa umdla wabantu ekuqaleni kwenkulungwane yama-20 kwaye ekugqibeleni zenzeka ngo-1960s. IBritani, iFransi, iSoviet Union kunye namanye amazwe benze ilinge lokuqala. Ngenxa yesantya esikhawulezayo sokwakha kunye nexabiso eliphantsi lemveliso yezakhiwo ezingasetyenziswayo, badume ngokukhawuleza kwihlabathi liphela.
Ukubonakala kwezakhiwo zangaphambi kokufakelwa ibiyinto engqongqo kwaye iyunifomu. Emva kwexesha, abantu benza ukuphuculwa koyilo, okwandayo ukuguquguquka kunye nokwahluka, ukuze izakhiwo ezibambekayo zingakhiwa kungekuphela nje kuphela, kodwa kunye nezitayile ezityebileyo.
I. Imisebenzi kunye neeNzuzo ze-GRC eziDityanisiweyo zoKhuseleko lwaNgaphandle zoLwakhiwo
Iimveliso zepherogal ye-GRC zinokwahlulwa kubume, kubume, umbala, ukuthungwa, njl.
1. Ubume bokukhusela ubandakanya: udonga olungaphandle, uphahla, umnyango wecango, umnyango wangaphandle, njl.
2. Ubume besakhiwo esisetyenziselwa ukudibanisa umhombiso we-facade yangaphandle kunye nokugcinwa kobushushu ukumelana nomoya kunye nemvula, utshintsho lobushushu, imitha yelanga, njl.
3. Umsebenzi: Inepropathi yokugcinwa kobushushu, ukufakwa kobushushu, ukungena kwamanzi, ubungqina bomswakama, ukumelana nomlilo, ukuqina, ukuzicoca, njl.
4. Inokwahlula-hlulwa ibe yindawo enye yokubiyela kunye ne-multi-bay edityanisiweyo yesakhiwo.
5. Inokwahlulwa ibe yinkqubo-eyodwa yomaleko kunye nenkqubo yeqela eliqulunqwe ngamacangca amaninzi. Umaleko wangaphandle ngumaleko okhuselayo, embindini usebenzisa izixhobo zokuzifudumeza zokufudumeza, kwaye ungqimba lwangaphakathi luyilo olungaphakathi lomhlaba.
6. Isakhelo ngasinye sisebenzisa amathambo njengesakhelo esixhasayo okanye someleleyo sangaphakathi sokhuseleko njengokuqinisela;
Eyona misebenzi iphambili kunye nezibonelelo zezakhiwo ezenziweyo ze-GRC zezi:
(1) Uyilo olwahlukeneyo.
Okwangoku, uyilo lwendlu yokuhlala aludibani neemfuno zezindlu, kunye neendonga ezininzi ezithwele umthwalo, indawo encinci, ukwahlula abafileyo, kunye nendawo kwigumbi ayinakukwazi ukwahlukana ngokulula. Nangona kunjalo, izindlu ezenziwe ngaphambili zinokwahlulwa zibe ngamagumbi amancinci kwiiholo okanye amagumbi amakhulu kwiiholo ezincinci ngokweemfuno zabahlali. Enye yeengxaki eziphambili kumagumbi aguqukayo ngokulula kwizakhiwo zokuhlala kukudibanisa ukukhanya kodonga. I-GRC, GRG, GRP kunye nezinye izixhobo ezintsha zezona zixhobo ezilungileyo zangaphandle zodonga lwangaphandle, udonga lokwahlulahlula, indawo ezilengisiweyo kunye nodonga lwangaphakathi lodonga.
(2) Ukusebenza ngokutsha
Izakhiwo ezenziwe nge-PC-GRC zinezi zinto zilandelayo:
1. Ukukhuselwa kwendalo kunye nokungabikho kongcoliseko. Udonga lunemisebenzi yokuzihlambulula nokucoca umoya.
2. Udonga olungaphandle lokonga amandla lunobushushu bokufaka ukufudumeza ubushushu ebusika kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kofakelo lomoya ehlobo;
3. Ukufakwa kwesandi kuphucula umsebenzi wokutywina kweendonga neengcango kunye neefestile. Izixhobo zokufakelwa kokufudumeza zinomsebenzi wokufakwa kwesandi, ukwenzela ukuba zibonelele ngendawo ethuleyo kwigumbi kwaye zithintele ukuphazamiseka kwengxolo yangaphandle.
4. Ukuthintela umlilo kunye nokubuyisa idangatye ukuthintela ukusasazeka okanye ukusasazeka komlilo;
5. Ukuncitshiswa kobunzima besakhiwo kunye nokwanda kokunxibelelana okuguqukayo;
6. Imbonakalo entle ayifuni ukunethezeka, kodwa i-facade icacile kwaye yahluke, kwaye ayizukuqhekeza, isisiqhwa okanye iphele emva kokusetyenziswa kwexesha elide.
7. Ukuchaphazeleka kakuhle kubonelela ngeemeko ezifanelekileyo ekhitshini nakwindlu yangasese ukuba zixhotyiswe ngezinto ezahlukeneyo zococeko;
8. Ulwandiso olufanelekileyo ukwandisa ukubakho kokudala izixhobo zombane, izixhobo zonxibelelwano, izixhobo zokonga umbane, njl.
(3) Umzi mveliso
Kunzima kakhulu kumphezulu ongaphandle wezakhiwo zemveli ukuvelisa iipatheni ezintle ngokuxhomekeke ekwakhiweni kwesiza, kwaye ipeyinti yemibala epeyintiweyo ayizukubonisa mehluko wombala kwaye ayizukuphela ixesha elide. Nangona kunjalo, i-GRC eyakhelwe ukwakhiwa kwephaneli yodonga lwangaphandle inokwenza ngokulula ngokuxhuma, ukutshiza ngomatshini, i-nanotechnology, itekhnoloji yokubhaka microwave kunye nobunye ubuchwepheshe. Izixhobo zokufakelwa kobuninzi zithathelwe indawo zizinto ezidityanisiweyo ze-PC-GRC; Iiplagi zephahla, ii-joists zensimbi ezikhanyayo, iihange zensimbi ezahlukeneyo kunye nezihlanganisi zonke ziyimveliso eyenziwe ngoomatshini ngemilinganiselo echanekileyo. Umgangatho kunye neepaneli zophahla zikhethwe kwakhona kwiifektri ukulungiselela ukwakhiwa. Izinto zangaphakathi ezifana nebhodi ye-jypsum, izinto zokugquma phantsi komhlaba, iiplanga ezixhonyiweyo zophahla kunye nokunye okunokwenziwa kuphela ngemigca yemveliso eyinkimbinkimbi. Ngaphandle koko, kwinkqubo yemveliso yomzi mveliso, ii-index index zomsebenzi zezixhobo ezinjengamandla, ukumelana nomlilo, ukumelana neqabaka, ukumelana nokufuma, ukufakwa kwesandi kunye nokugcinwa kobushushu kungalawulwa nangaliphi na ixesha.
Indlu ithathwa njengesixhobo esikhulu, kwaye izixhobo zangoku zePC-GRC zezixhobo zezixhobo. Umgangatho wala macandelo unokuqinisekiswa ngokuveliswa okungqongqo kwemveliso, kwaye indlu ehlanganisiweyo inokuhlangabezana neemfuno zokusebenza.
(4) indibano yolwakhiwo
Ukusukela ukuzixabisa kwe-PC-GRC edityanisiweyo yezakhiwo kuncitshiswa ngesiqingatha xa kuthelekiswa nezakhiwo zemveli, isiseko senziwe lula. Emva kokuba izinto zokwakha esele zinikezelwe zisiwe kumzi-mveliso, abasebenzi abasebenza kule ndawo bayazihlanganisa ngokwazo. Izinto ezinkulu ezomanzi ezinjengodaka, udaka kunye nolwakhiwo lodonga azisazukuvela kule ndawo. Ukwakhiwa kwendibano ye-PC-GRC kunezi zinto zilandelayo:
1. Inkqubela phambili ekhawulezayo, inokuhanjiswa ngexesha elifutshane;
2. Abasebenzi bancitshisiwe, kwaye imisebenzi yokunqamleza ilungile kwaye icwangcisiwe;
3. Inkqubo nganye yokusebenza inokujonga ukuchaneka njengofakelo lwezixhobo ukuqinisekisa umgangatho;
4. Indawo yokwakha inengxolo ephantsi, izinto ezincinci zesambuku kunye nokuchitha okuncinci kunye nokukhutshelwa kwamanzi amdaka, oku kuluncedo kukhuseleko lwendalo;
5. Indleko zokwakha zincitshisiwe.